Makakatanwa muMDC-T Orwadza Vamwe Vagari muGweru
GWERU — Apo meya nemakanzura mapfumbamwe veguta reGweru vakatarisana nekudzingwa nevakuru vakuru vebato ravo reMDC-T, vamwe vagari vari kuchema-chema kuti makakatanwa ari mubato iri anogona kuita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo mukanzuru.
Vamwe vagari vemuGweru vanoti vanotyira kuti panogona kuve nenguva yakareba mabasa ekanzuru asingafambe zvakanaka kana bato reMDC-T rikatambira danho rekudzinga makanzura gumi eguta iri kusanganisira meya mutsva, VaHamutendi Kombayi, zvichitevera chisungo chehutungamiri hwe MDC-T mu Midlands South, chekumbomisa makanzura aya kuva nhengo dzebato.
Hutungamiri hwe MDC-T muMidlands hwakatora danho iri mukupera kwesvondo ndokubva hwakurudzira kuti dare reNational Executive rebato iri kuti ridzinge mubato VaKombayi vevamwe vavo vapfumbamwe nechikonzero chekuti havana kutevedzera gwara rebato pakusarudza meya nemutevedzeri wake.
VaCornelia Selipiwe ndivo mutauriri wevechidiki muMDC-T mudunhu reMidlands South.
VaSelipiwe vanoti ivo semutevedzeri webato havapokane nezvinenge zvataurwa nevakuru vakuru vebato.
Asi VaSelipiwe, avo vanovewo sachigaro weGweru Residents and Ratepayers’ Association vanobvumirana nemaonero ekuti kana bato reMDC-T rikadzinga makanzura aya, danho iri rinogona kuvhiringidza mafambisirwe ebasa mukanzuru.
Mumwewo Mugari, Muzvare Diana Dube vekuMkoba 4 vanotsinhirawo kuti kanzuru yeGweru yakatarisana nematambudziko anoda kugadziriswa nekukasika.
Muzvare Dube vanoti mushure mekugadzwa kwemakanzura svondo rapera, vange vaine tarisiro yekuti matambudziko aya ange ave kuzogadziriswa, asi vanotiwo nyaya yekuda kudzingwa kwemakunzura iyi inogona kukanganisa zvinhu.
Hutungamiri hwe MDC-T muMidlands South hunoti makanzura aya akaita zvemusoro wavo vakasarudza VaKombayi sameya weguta reGweru naVaArtwell Matyorauta semutevedzeri wameya.
Asi zvinonzi bato raive rati kusarudzwe VaCharles Chikozho sameya, uye VaKenneth Sithole semutevedzeri wavo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raVaKombayi nedanho iri rekuda kuvadzinga mubato.
Asi vamwe kanzura vasina kuda kudomwa nezita vanoti kunyange hazvo vachibvumirana nekuti MDC-T itore matanho kunhengo dzinenge dzarasika gwara, zvakakosha kuti bato iri rinyatsobata nyaya iyi nemazvo sezvo vachiti kusaita izvi kuchizogona kuti rirasikirwe nevatsigiri.
Kanzura ava vabvumawo kuti kudzingwa kwavo kunogona kudzorera shure mabasa ekanzuru.
Mumwe Mugari, VaTitus Mangoma vekuDaylesford, vanotiwo MDC-T ikaenderera mberi vane tarisiro yekuti hurumende ichakasika kugadzisira zvinodiwa kuti pazove nemakanzura matsva kuti mabasa ekanzuru agofamba zvakanaka.
Bepanhau reChronicle rinoti munyori webazi rezvematunhu, VaKillian Mupingo, vanoti bato reMDC-T harikwanise kudzinga makanzura aro vachiti izvi zviri kunze kwemutemo sezvo pasina mhosva yavakapara.
Asi mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, vanoti pasi pebumbiro remitemo yenyika idzva bato rezvematongerwo enyika rinokwanisa kudzinga nhengo dzaro pakuve mumiririri webato iri muparamende kana mukanzuru kana bato iri ragudzikana kuti nhengo iyi inenge isina kutevedzera zvido zvebato iri.
VaMwonzora vavimbisa kuti havazi kungozodzinga nhengo dzavo vasina kunyatsoongorora zvadziri kupomerwa uye vasina kudzipa mukana wekupawo divi radzo.
Zviri kuitika muGweru zviri kuitikawo mukanzuru yekwaMutare nemamwe makanzuru.